औषधिको राजा कुरिलोको कमाल जानिराखौं, यस्ता छन् फाइदा – Khabar Silo
तातो पानी पिउने बानी छ भने एकचोटी नछुटाई पढ्नुहोस हैहरेक दिन ८ देखि १० गिलास पानी शरीरको लागि आवश्यक हुन्छ र दिनमा तीन पटक तातोपानी पिउने बानी बसाउनुभयो भने तपाईंंको शरीर बिरामी हुनबाट बचाउन सक्नुहुन्छ । यसका फाइदाहरु : १. तौल कम गराउँछ: तपाईंंको तौल लगातर बढिरह्यो र धेरै कोसिसपश्चात् पनि कुनै असर गरेन भने […]
अनुहारमा आएका अनावश्यक रौँले कतिपयलाई हैरान बनाएको हुन्छ । यस्ता रौँले महिलालाई अझ बढी कुरुप देखाउने भएकाले पनि यो चिन्ताको विषय बनेको हुन्छ । यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउने योजनामा हुनुहुन्छ भने सुन्तलाको बोक्रा र महको प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ। सुन्तलाको बोक्रामा भिटामिन सी हुन्छ । जसले फ्री रेडिक्लससँग लड्ने काम गर्छ । परिणाम रौँ उम्रिने […]
दिनदिनै बिहान खाली पेट लसूनको एक पोटी खाँदा विभिन्न रोगको उपचारमा सहायता पुग्छ ।लसूनमा एलिसिन जस्ता पोषक तत्त्वहरू हुन्छन् । यिनले स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै समस्याहरूबाट बचाउँछन् । भारतको राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक डा अरुण दधीचका अनुसार पुरुषहरूका लागि लसून सेवनका सात फाइदा यी हुन् ? लसूनमा भएको सेलेनियमले निःसन्तान समस्यालाई हटाउँछ।यसमा भएको एन्टीब्याक्टेरियल तत्त्वका कारण […]